उर्लाबारीका गायक निशान भट्टराईलाई एउटै केटीको दिनमै १५० कल « Deshko News
उर्लाबारीका गायक निशान भट्टराईलाई एउटै केटीको दिनमै १५० कल
नेपाल आइडलबाट सांगीतिक क्षेत्रमा चर्चा कमाएका निशान भट्टराईको माग अहिले उच्च छ । मिठो स्वरका कारण नै उनको माग उच्च रहेको हो । आइडलको उपविजेता बनेपछि निशानलाई विभिन्न प्रकारका प्रस्ताव आइरहेका छन् । प्रस्ताव गीत गाउनका लागि त छदैछन् त्यो भन्दा बढी प्रेम प्रस्ताव आउने गरेका छन् ।
दिनमै एक सय ५० कल गर्ने पोखराकी युवती
पोखारमा एक युवती मेरो डाइहार्ड फ्यान हुनुहुन्छ । मलाई उहाँको नाम चाहिँ याद भएन । उहाँ मलाई निरन्तर फोन गरिरहनुहुन्छ । यतिसम्म कि एक दिन उहाँले मलाई १ सय ५० पटकसम्म फोन गर्नुभएको छ । म फुर्सद भएका बेला फोन रिसिभ गर्थे । मैले फोन रिसिभ नगरे पनि उहाँ मलाई फोन गरिरहनुहुन्थ्यो ।
केही समयअघि म गाईघाटको एउटा कार्यक्रममा सहभागि भएको थिएँ । त्यहाँ दर्शकहरुको ठूलो भीड थियो । त्यही भीडमा केटीहरुको अलग भीड पनि थियो । मलाई त्यो भीड छिचोल्न निकै गाह्रो भयो । त्यसपछि मलाई कार्यक्रम आयोजकले घेरेर स्टेजमा लाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यही केटी फ्यानहरुको समूहले मलाई पटाडिबाट तानेर ज्याकेट नै च्यातिदिए ।
मसँग विवाह गर्छु भन्छिन्
इटहरीमा भएकी एक डाइहार्ड फ्यानले सामाजिक सञ्जालमा मलाई निरन्तर म्यासेज पठाइरहनुहुन्छ । यद्यपि उहाँसँग मेरो भट भएको छैन । उहाँ मसँग जसरी पनि विवाह गर्छु भन्नुहुन्छ । यतिसम्म कि उहाँ मसँग विवाह गर्न मेरो बुबाममीसँग कुरा गर्छुसम्म भन्नुहुन्छ ।
स्केच बनाएर दिने फ्यान
केही दिनअघि म बसन्तपुरको एउटा कार्यक्रमा सहभागी भएको थिएँ । त्यहाँ एक जना फ्यानले पेन्सिल स्केच बनाएर मलाई गिफ्ट दिनुभएको थियो । त्यो स्केच यति राम्रो छ कि त्यसलाई मैले आफ्नो कोठमा सजाएर राखेको छु ।
बर्थ डे केक बोकेर आउने फ्यान
मेरो जन्मदिन जेठ २९ गते हो । यसपालि म बिहानै घरमा जन्मदिन मनाएर बेलुका साथीहरुसँग बाहिर बसेको थिएँ । भोलिपल्ट घरमा आउँत त मेरा दुई जना फ्यान बर्थ डे केक र गिफ्ट बोकेर मेरो घरमा आउनुभएको रहेछ । त्यो देखेर म आश्चर्यचकित भएँ, किनभने मैले उहाँहरुलाई चिनेको थिइनँ र उहाँहरुले पनि मेरो घर देख्नुभएको थिएन । कसरी मेरो घर पत्ता लगाएर आउनुभयो पत्तो भएन । साप्ताहिकबाट
यहाँ भ्रष्ट्राचार र सरकारको विरोध गर्नुहुदैन् ? यो नेपाल हो – भ्रष्ट्राचार गर्नेहरु देशका नाईके भएका छन भिडियो सहित
यहाँ भ्रष्ट्राचार र सरकारको विरोध गर्नुहुदैन् ? यो नेपाल हो – भ्रष्ट्राचार गर्नेहरु देशका नाईके
सरकार वर्वाद भयो भन्दै सार्बजनिक भयो कडा गित (भिडियोसहित)
काठमाडौँ –पत्रकार गिरिजा अधिकारीको शब्द रहेको ‘ए सरकार–२’ म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको हो । डान्स
सारेगामापाका बिजेता आयुष केसीलाई विमानस्थलमा भब्य स्वागत
काठमाण्डौँ । भारतीय टेलीभिजन च्यानल जिटिभीको सारेगम लिटल च्याम्सको २०१९ को संस्करणमा सहभागी नेपाली बालप्रतिभा
सारेगमप लिटिल च्याम्पमा तेस्रो बने प्रितम
काठमाण्डौँ । भारतीय रियालिटी शो ‘सारेगमप लिटिल च्याम्प’मा नेपालका दुई बालगायक तेस्रो र चौथो भएका
माल्दिभ्स पठाईदिने भन्दै ठगी, महिनौं बित्दापनि कतैबाट न्याए नपाएपछि…
झापा। वैदेशिक रोजगारका लागि जाने क्रममा गौरादह २ निवासी सावालाल ठगिएको पनि महिनौं बितिसकेको छ।
कांग्रेसले गर्यो दुई सय जनालाई कारबाही, को–को परे हेर्नुहोस् (सूचीसहित)
काठमाण्डौँ, असार ३ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिले करिब दुई सय जनालाई कारबाही गरेको छ
राजधानीमा फेरि टिपर आतंक, स्कुटर चालकको ज्यान गयो
काठमाडौँ । भक्तपुरमा टिपरमा स्कुटर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । सूर्यविनायक नगरपालिका– ९